Hurghada र Sharm el-शेख - सबैभन्दा लोकप्रिय मिश्रको रिसोर्ट, लाल समुद्र मा स्थित छ। यो पर्यटन धेरै लोकप्रिय छन् यी ठाउँमा छ। र, तदनुसार, यहाँ छन् भनेर होटल परिसर एक विशेष sophistication छ।
तिहार रिवेरा - लक्जरी र सस्तो छुट्टी
जो जस्तै लग, को मानार्थ स्थिति बोक्न सक्नुहुन्छ जटिल, को नाम हो "मिश्रको सबै भन्दा राम्रो होटल।" यो होटल टाढा छैन Hurghada को केन्द्र देखि लाल समुद्र तट मा स्थित छ। यो एक धेरै सुअवसर स्थान उल्लेख गर्न लायक छ: एक हात मा - टाढा पर्याप्त शहर को हल्ला टाढा र अन्य मा - त्यसैले धेरै टाढा जीवन पूर्ण स्विंग पूर्ण स्विंग छ जहाँ स्थानहरू हटाइयो। यो विशाल प्रदान गर्दछ, त्यहाँ तीन स्विमिंग पूल, एक निजी समुद्र तट र उच्च गुणवत्ता सेवा दुई रेस्टुरेन्ट छन्। हामी बच्चाहरु को लागि मिश्र मा सबै भन्दा राम्रो होटल हो के कुरा भने, महोत्सव रिवेरा पक्कै यो सूचीमा श्रेय। मिनी क्लब, स्विमिंग पूल, खेल मैदान र सबै बाँकी - यो जटिल बच्चाहरु को लागि आवश्यक सबै संग सुसज्जित छ। त्यसैले तपाईं सुरक्षित यहाँ सम्पूर्ण परिवारका साथ आउन सक्नुहुन्छ।
आवास को लागत
होटल कोठा कोष खुसी किसिम। सम्भावित पाहुनाहरूलाई को ध्यान मूल शैली मा सजाया आधुनिक र विशाल कोठा प्रस्ताव छन्। सबै अपार्टमेन्ट तिनीहरूलाई बाहेक त्यहाँ अतिथि सहज महसुस गर्न आवश्यक सबै छ, उज्ज्वल र घरेलू छन्। यो उच्च गुणवत्ता सेवा र, सामान्य मा बावजुद, होटल को उच्च स्तर, त्यहाँ एक एकदम कम मूल्य छ कि विचारणीय छ। उदाहरणका लागि, दुई मान्छे को लागि एक डबल कोठा मा एक हप्ता मात्र 23 हजार rubles खर्च हुनेछ - र यो उल्लेख गर्नुपर्छ हुनत बिल्कुल मुक्त, दुई छोराछोरी लाग्न सक्छ संग। यो स्तर होटल को, तर अझै पनि सेवा संग को लागि "सबै समावेशी" एक धेरै कम मूल्य हो।
पाँच तारा बाँकी
अर्को रिसोर्टमा ध्यान उल्लेख गर्नुपर्छ। सायद यो साँच्चै मिश्रको सबै भन्दा राम्रो होटल छ। निजी पाँच-तारे रिसोर्ट जटिल, को दाना बीच Resort भनिन्छ जो। यो होटल जो सधैं छुट्टी मा एक अविस्मरणीय अनुभव प्राप्त गर्न फेरि यो स्थान फर्कन पाहुनाहरूको देखि सकारात्मक प्रतिक्रिया धेरै हुन्छ छ। यो होटल (5 ताराहरु) यसको आफ्नै स्वाद छ - र यो बाहिरी स्विमिंग पूल छ, एउटा दह को आकार भएको। पनि साइट व्यावसायिक डाइभिङ केन्द्र मा स्थित, र एक पियानो बार।
होटल मा आवास
दाना बीच Resort -5तारे होटल उज्ज्वल शानदार प्राकृतिक प्रकाश काठ को गरे, तल्ला संग कोठा खुला balconies र आधुनिक फर्नीचर प्रदान। सबै अपार्टमेन्ट सबै आवश्यक प्रसाधन संग निजी बाथरूम संग सुसज्जित छन्। (एक बालकनी प्लाज्मा टिभी, मुक्त इन्टरनेट पहुँच, वातानुकूलन र धेरै अन्य सुविधाहरु) तपाईं आवश्यक सबै कुरा छ जो यस होटल जटिल, मा एक मानक डबल कोठा मा आराम एक हप्ता को लागत 84.000 rubles खर्च हुनेछ। निस्सन्देह, मा-साइट सेवा "सबै समावेशी", बाहेक पनि आवास निःशुल्क प्रदान गरिनेछ जो बच्चा, संग कोठा मा आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले, यो वास्तवमा कारण, यो होटल निश्चित को श्रेणी मा पतन "को बच्चाहरु को लागि मिश्र मा सबै भन्दा राम्रो होटल।" खैर, त्यहाँ अर्को विकल्प यस्तै अपार्टमेन्ट, तर समुद्र दृश्य छ। 90 हजार rubles - लागत एक सानो थप हुनेछ। मानक तीन कोठा यो 127 हजार rubles को लागि सम्भव छ एक हप्ताको लागि रहन, र चार सुइट गर्न - 181 000. सामान्य लागि, यो लक्जरी र गुणस्तर सेवा गर्न accustomed छन् जो ती मानिसहरूको लागि एउटा विकल्प हो। छुट्टी निश्चित अविस्मरणीय हुनेछ यस होटल मा बिताए।
व्यापार वर्ग को रिसोर्ट जटिल
मिश्र गरेको होटल "सबै समावेशी" को बोल्ने, यो पुनर्जागरण Sharm एल शेख स्वर्ण हेर्नुहोस् बीच जस्ता जटिल ध्यान उल्लेख गर्नुपर्छ। यो - लक्जरी को epitome। कोठा रास मोहम्मद राष्ट्रीय पार्क र यसको आफ्नै विशाल समुद्र तट को भव्य दृश्य प्रस्ताव। होटल जहाँ तपाईं बस अतिथि चाहन्छ कि सबै भाँडा स्वाद गर्न सक्छन् सात रेस्टुरेन्ट छ। रेस्टुरेन्ट मा मुख्यतया अन्तर्राष्ट्रिय भोजन सेवा, र त्यो अकापुल्को जो प्रस्ताव भनिन्छ मेक्सिकन खाना ठाउँ छ। खैर, अतिथि इच्छा भने, नास्ता सीधा कोठा वितरित गर्न सकिन्छ। सफाई जुत्ता देखि, र वीआईपी-सेवाहरू संग खत्म - सामान्यतया, यो होटल सबै, र पनि अधिक प्रदान गर्दछ।
सुविधा र आवास विकल्पहरू
सबै कोठा - विशाल र आरामदायक र आश्चर्यजनक दृश्य सुविधा। यसलाई उल्लेख र यो होटल मा कोठा को लागत गर्नुपर्छ। यस सुसज्जित बाथरूम, वातानुकूलन, बगैचा दृश्यहरु र एक नरम डबल बेड एक दिन बारेमा 5500 rubles (-2+2आवास को विकल्प) खर्च हुनेछ संग डिलक्स अपार्टमेन्ट। तपाईंलाई परिवार सुइट रहन चाहनुहुन्छ भने, लागत 8,840 rubles वृद्धि गरिनेछ। चुनिएको अपार्टमेन्ट र अवस्था आधारमा - सामान्य मा, मूल्य फरक हुन सक्छ।
Idyll र शान्ति
र अर्को ठूलो होटल जटिल, निश्चित स्मरणीय छुट्टी हुने, शाही Rojana Resort भनिन्छ। यो लक्जरी5तारे होटल, 14 वर्ष को लागि अस्तित्व छ जो। यो रसीला विदेशी रूखहरू संग सुरम्य बगैचा छ landscaped हरियो 165 वर्ग मीटर को, क्षेत्र मा स्थित छ। यो होटल धेरै मूल सुविधा छ। र यो छ - यसको धनी पानी संसार र कोरल reefs को तेजस्वी सुन्दरता। आखिर, यो होटल सम्पूर्ण रिसोर्ट मा सबै भन्दा राम्रो गोता केन्द्र को एक स्थित छ। आवास, सुरम्य परिदृश्य आफ्नो पाहुनाहरूलाई मदत गर्न सधैं गर्ने तयार थप सानो घरहरू जस्तै हुन् जो सेतो रंग को दुई-मंजिल्ला भवन, सत्कार कर्मचारी - यो ध्यान र होटल को एउटा अचम्मको माहौल उल्लेख गर्नुपर्छ। र, को पाठ्यक्रम पूर्ण स्वच्छ समुद्र तट र समुद्र, जसको लागि विभिन्न देशका यहाँ यात्रा पर्यटकहरु को बहुमत। यो परिवार, शान्तिपूर्ण र आराम छुट्टी लागि मिश्र मा सबै भन्दा राम्रो होटल छ - हामी सुरक्षित शाही Rojana Resort भनेर भन्न सकिन्छ किनभने।
तिनीहरूले एक विशेष होटल मा जाँच अघि धेरै सम्भावित पाहुनाहरूलाई, मिश्र सबै होटल भएका उहाँको बारेमा समीक्षा, पढ्नुहोस्। फोटो चित्रहरु तिनीहरूले एक विशेष क्षेत्र बाट आशा गर्न सक्छौं के मान्छे उदाहरणहरू छन् किनभने, एउटा महत्त्वपूर्ण कारक पनि हो। टिप्पणीहरू शाही Rojana Resort मा पर्यटकहरु बायाँ, आँखा मनपर्ने शब्द को शाब्दिक अर्थमा। पहिलो कुरा पाहुनाहरूलाई आफ्नो स्थान नोटिस। पहिले, यो विमानस्थल नजिकै स्थित छ। दोश्रो - निजी समुद्र तट, घूस गर्न सक्छन् जो छैन। यहाँ आउन व्यवस्थित गर्ने मान्छे, यो बसोबास गर्न धेरै गाह्रो छ आगमन रूपमा आवास, अग्रिम बुक गर्न सल्लाह छ - होटल लगभग एक सय प्रतिशत भरिएको छ। सक्रिय मेहमान Incendiary संगीत मा, भव्य एनिमेसन, poolside खेल, र समुद्र तट मा बारेमा रेभ। सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, र आफैलाई खुशी अस्वीकार नगर्ने मान्छे व्यञ्जनहरु र व्यवहार को एक किसिम खान। विशेष गरी धेरै पर्यटक र मुख्य माछा रेस्टुरेन्ट, वास्तविक विशेषज्ञहरु पाक कला द्वारा तयार अन्तर्राष्ट्रिय भोजन गर्दछ जो लोकप्रिय। मिश्रको निश्चित सबै भन्दा राम्रो होटल। त्यसपछि त नरमाइलो लाग्यो बस छैन - पाहुनाहरूलाई एउटा सानो कम्पनी को लागि यहाँ जान सल्लाह छन्। सामान्य मा, सबै एउटै को राय - यहाँ तपाईं फिर्ता फेरि र फेरि एक सुन्दर देशमा लाल समुद्र मा एक महान छुट्टी, मिश्र भनिन्छ जसको लागि आउन सक्नुहुन्छ। होटल "5 ताराहरु" धेरै फरक हुन सक्छ, तर छनोट लक्ष्य र सम्भावित पर्यटक मनसाय मा केवल निर्भर गर्दछ।
होटल 2: * ऐबालोन Resort, गोवा, भारत। फोटो र समीक्षा
पुरानो महल Resort Sahl Hasheesh5* (मिश्र / Sahl Hasheesh): तस्बिर, मूल्यहरू र समीक्षा
Esperides Sofras होटल Bungalows3* (ग्रीस / Thassos): समीक्षा
भर्जिनिया होटल3* छ (रोड्स, ग्रीस): अवलोकन, कोठा र समीक्षा
पैसाले के कुरा गर्छ?
"आगो" Agnes। नाम अर्थ
चरा को aspergillosis: वर्णन, लक्षण, उपचार र रोकथाम
आयोडिन को मादक समाधान: प्रयोगकर्ता र आवेदन